Nhau - Pfupiso kuunzwa kweyakagadzika lime kiln
Pfupiso kuunzwa kweiyo yakatwasuka lime kiln
Iyo yakatwasuka lime kiln inoreva chimu yekuverenga calcining yekuburitsa iyo inonamira ichienderera muchikamu chezasi chekudyisa kwepamusoro. Inoumbwa nemuviri wechipfuva, kuwedzera uye kuburitsa chishandiso nemidziyo yekufefetedza. vertical lime kiln inogona kuganhurwa mumhando ina dzinotevera zvichienderana nemafuta: coke ovhiri yakatwasuka huni, marasha akatwasuka huni, huni yakatwasuka huni uye gasi yakatarisana. Iko mukana weiyo yakatwasuka lime kiln ndeyekuti ishoma capital investa, pasi pevhu nzvimbo, yakanyanya kushanda, yakaderera mafuta kudyiwa uye nyore kushanda.
Limestone uye marasha zvakateedzana zvakapihwa mumabhini ekuchengetera neforogo. Iwo ekuzasi mativi emabhini ane otomatiki anorema ma hopper. Mushure mekuyera zvinoenderana nehuwandu hwakagadzwa nekombuta, iro limestone nemarasha zvinosanganiswa. Izvo zvinhu zvakasanganiswa zvinosimudzwa nemota yekusvetuka nepakati pebhiriji yakakombamira kumusoro kweiyo kiln kiln, uyezve inosaswa mumoto kuburikidza nemidziyo yekurodha uye yekushandisa yekudyisa
Iyo mbishi zvinhu zvinodzika pasi pechiito cheyayo giravhiti muchoto. Pazasi pevira, iyo blower yemidzi inotonhodza lime pazasi peiyo huni. Mhepo kubva pasi inotsinhana kupisa neiriimu uye inopinda munzvimbo yekuverenga semafuta mushure mekushisa kwayo kwasvika madhigirii mazana matanhatu.
Iyo Limestone kubva kubhenekeri kumusoro inopfuura iyo preheating zone, iyo calcining zone, uye iyo inotonhorera zone, uye akazara makemikari maitiro pasi pechiito chekupisa kwakanyanya kuti aora ave calcium oxide (lime). Shure kwaizvozvo, inoburitswa kubva muhovhoni yepasi neiyo disc ashing muchina uye dota rinoburitsa mudziyo riine basa rekuvhara chisimbiso, kuti uone iyo isingamise mhepo kuburutsa.
Kunyanya zadzisa otomatiki achirema muripo uye kutonga kwemaitiro ekusanganisa, kiln calcining uye lime kukanda.
(1) otomatiki uye echinyorwa system ese akashongedzerwa. Kunze kwekushandisa kwemanyorerwo kweiyo-saiti oparesheni bhokisi, ese anogona kudzorwa nekushanda kwekombuta mune yepakati yekudzora imba.
(2) Iyo data yezvose zviridzwa (senge yekumanikidza geji, kuyerera mita, tembiricha chiridzwa) inoratidzwa pakombuta uye inogona kudhindwa neprinta.
(3) Yakakwana WINCC yemunhu-muchina interface inoshanda sisitimu.
(4) Yakazara Nokia yakangwara inorema kuyera module batching, uremu uye muripo system.
(5) Yakavimbika lime kiln yezvinhu nhanho nhanho, smart masters uye zvimwe zvekushandisa midziyo.
(6) Yakakwana pane-saiti kamera yekutarisa system. Yechokwadi-yenguva mhenyu mifananidzo uye yepakati yekudzora komputa dhata, kunyatso bata zvese zvinongedzo zveiyo yekugadzira tambo.
(7) Yakavimbika Siemens PLC system, inverter uye maindasitiri komputa maviri-chikamu microcomputer akangwara system.
(8) Zvakatipoteredza zvine hushamwari. Zvinoenderana nemitemo yekudzivirira nharaunda uye zvido zvekugadzira, inogona kuve yakagadzirirwa nesipo yekurapa sisitimu uye desulfurization system kuti uwane emission emutemo.
Post nguva: Chivabvu-25-2020
Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment, Karusiyamu Hydroxide Equipment, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira, Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Kugadzira Calcium Hydroxide,